Analanjirofo : mitobaka ny volan’ny jirofo | NewsMada
Analanjirofo : mitobaka ny volan’ny jirofo
Par Taratra sur 09/11/2017
Nisokatra ny 16 oktobra teo ny taom-piotazana jirofo any Analanjirofo. Tafakatra 18.000 Ar- 25.000 Ar ny kilao ary hafa koa ny vidin’ny tangozany kely (pikonjirofo). Maro ny tantsaha lasa manambola tampoka ary mampiasa azy tsy am-piheverana. Tany amin’ny kaominina Ampasina Maningory, nandritra ny rindran-kira, ny alahady teo, nisy lehilahy iray nanarama tovolahy miisa efatra, 50.000 Ar tsirairay avy, nilanja azy tamina lalana 2 km, satria tsy mbola niaina izany mpanjaka nolanjaina izany, hono, izy.
Milaza ireo nahita fa “mety io nataony io satria ananany ny vola sady mizara ho an’ny mpikarama izy”. Ho an’ny hafa, “tsy mahazaka ny fananany vola ity lehilahy ity, ka mandanilany fahatany ny volany fa tsy mitsinjo ny hoavy na mampitombo ny vola azony”. Misy koa andiana tanora, nitondra tahon-kazo mbola feno jirofo nentina nijery ilay fampisehoana.
Midangana ny vidin-javatra vokatry ny jirofo. 700 Ar ny kapoakan’ny vary avy eto an-toerana (2.450 Ar/kg) any an-toerana, 500 Ar ny kapoakan’ny vary hafarana avy any ivelany (1.750 Ar/kg). Vidiana 1.200 Ar ny fahana finday misanda 1.000 Ar, ary manantombo 200 Ar toy izany avokoa ny karatra fahana rehetra. Mirongatra ny asan-jiolahy mandroba ireo olona mahalafo jirofo sy ny manana tahirin-jirofo.
Sajo sy Njaka A.